Singapore: Fisintonana ny fanasana mpanabe marenindrenina iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Mey 2010 14:09 GMT
“Nandany telopolo taona mahery tamin’ny fampianarana ary nampianatra mpianatra an’arivony i Susan Elliot. Matsilo saina izy, mahay miteny tsara, ary manana fahaizana manokana amin’ny hatsikana”, hoy Ingahy Anthony Mullen manoratra ao amin'ny tranonkala Teacher Magazine. “Mampianatra ny ara-tsosialy sy tantara amin’ny mpianatra ankapobeny sy amin’ny mpianatra marenindrenina izy, ireo rehetra ireo dia miaraka ao anaty kilasy iray ihany
Ny talenta goavana ananany amin’ny fampianarana ny ara-tsosialy sy tantara amina mpianatra “ara-dalana” sy mpianatra marenindrenina indray miaraka anaty kilasy iray dia ohatra miavaka amin'ny fahaiza-mampianatra”.
Misongadina loatra ny zava-bitany ka nahatonga ny Ministeran'ny Fampianarana any Singapore nanasa azy hanatrika ny Fihaonamben'ny Mpampianatra izay hatao any Singapore amin'ny volana Septambra amin'ity taona ity.
Kanefa, raha vao fantatry ny MOE (Ministeran'ny Fampianarana) fa hoe marenindrenina i Ms Elliot, nosintoniny indray ilay fanasany an’i Ms Elliot.
Araka ny fanambaràn’i Mr Mullen, ny fanomezana fanasana avy tamin'ny MOE ary ny fisintonana izany indray avy eo dia toa ny “resaka tsy mifankahazo”. “Ny fahitàna ny kilemany sy ny nisintonana indray ilay fanasana azy dia hevitra ara-politika maloto nataon’ireo olom-panjakana satria efa fantatr’ireo solontenan’ny Fampianarana any Singapore hatrany aloha tany fa marenindrenina i Susan”, hoy Mr Mullen izay manana ny lahatsorany miely patrana any anaty aterineto sy any anaty tranonkala sosialy Facebook any.
Niteraka tabataba teo amin'ny tontolon’ny mpitoraka blaogy ny fanapahan-kevitry ny MOE, mpitoraka blaogy maro no tohina tamin'io fanapahan-keviny io.
Mr Brown, mpitoraka blaogy Singaporeana iray fanta-bahoaka, no namelively ireo solontenan’ny MOE. Nanoratra [Eng] izy:
raha efa nasainao ilay olona, aleo izy ho tonga. Nahoana no nalaina ny fanasana raha tsy hoe fantatrao fa toy ireny olona mpampihoroho na olona manohintohina ny filaminam-bahoaka ireny io olona io ?
Ary raha tena tsy hanasa azy marina ny MOE satria izay no zava-misy momba azy, manome tsiny an’Andriamanitra, MARENINA, henatra ho anareo solontenan’ny fampianarana Singaporeana izany. Mendrika hizaka ny fahafaham-baraka manerana ny firenena sy manerana izao tontolo izao aterak'io ianareo.
Velom-panahiana ny mpitoraka blaogy Singaporeana iray, Callan Tham, mikasika ny hafatra nalefan’ny MOE ho an’ny mpianatra sy ny olona rehetra miaraka amin'io fanapahan-kevitra io. Nanoratra izy:
Araka ny hevitro dia manimba ny fandefasana iny hafatra iny amin’ny mpianatra sy ho an'ny mpianatsika ary ho an’izao tontolo izao. Mendrika tsara kokoa noho izany i Susan Elliot, ary tsy latsa-danja amin'izany ny mpianatsika. Mahamenatra ny fitondran-tena nasehoan’ny solontenan’ny fampianarana eto amintsika, ary mila manome fanazavana mandresy lahatra tsara ireo olona voakasika tamin’iny ny Minisiteran’ny Fampianarana.
Hatreto, taorian'ny fanontanian'ny blaogy miaro ny fahalalahan'ny fampielezam-baovao azy The Online Citizen mikasika ny fanapahan-kevitra noraisiny dia niverina nanasa an'i Miss Elliot indray ny MOE mba hanatrika ilay fihaonambe indray ny MOE:
Ho valin’ny fanontaniana izay napetraky ny The Online Citizen mikasika ny zava-nitranga, niteny ny MOE «Ny fakana indray ilay fanasana tany amin’i Miss Elliot dia hadisoana avy taty aminay » izay vokatry ny «tsy fahazoana resaka na teo amin’ny filana mpandika teny na teo amin’ny fahaizamanaony ».
Nilaza ny MOE fa efa nitondra ny fialantsinin’ny minisitera tamin’ny anarany manokana tamin’i Ramatoa Elliot ny lehiben’ny Komity Mpikarakara ny Fivoriambe amin’ny Septembra. “Tsy maintsy manazava iny toe-javatra iny izahay mialoha ny handraisana fanapahan-kevitra”, izay no navaliny tamin'ny TOC.
Nilaza ny MOE fa efa niresaka mivantana tamin-dramatoa Elliot ny lehiben’ny Komity Mpikarakara ny Fivoriambe amin’ny Septembra mba hampita ny fialantsinin’ny minisitera . “Tsy maintsy nanazava ireny toe-javatra ireny izahay mialoha ny handraisana fanapahan-kevitra”, izay no nambarany ho valinteny ho an'ny TOC.
Nandray ny fialantsininay i Ramatoa Elliot ary faly ny Komity Mpikarakara fa handray anjara amin’ilay Fivoriamben’ny Mpampianatra amin’ny Septembra izy. Tsy andrinay ny hahita ny fandraisan’anjarany mba ho fahombiazan'ilay fihaonambe”, hoy ny MOE..
21 Mey 2020Azia Atsinanana